नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन्.... - Purbeli News
शनिबार, चैत्र १०, २०७४
नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन्….
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४ समय: ७:५६:५८
म बंगलादेशी हुँ । मेरो घर राजधानी ढाकामा पर्छ । मेरो विवाह भएको करिब तीन वर्ष भयो । हाम्रो सानो बच्चा पनि छ । नेपालको सौन्दर्यबारे मैले पढेकी थिएँ । नेपाल घुमेर आएका साथीहरूले पनि मेरोसामु धेरै वर्णन गरेका थिए । त्यसैले म नेपाल घुम्न आतुर थिएँ ।
परिवारसँग नेपाल घुम्ने सल्लाह भयो । अरू साथीहरूसँग पनि सल्लाह भयो । अन्ततः हामी नेपाल आउने तय भयो, मार्चको दोस्रो साता । नेपाल आउने चाहना राख्ने त अरू पनि थिए, तर उनीहरूको समय मिलेन । अन्तिममा म, मेरो बच्चा र श्रीमान्सहित अन्य दुईजना नेपाल आउने निर्णयमा पुग्यौँ । सात दिनसम्म नेपाल घुम्ने उद्देश्यले हामी सोमबार ढाकाबाट नेपालका लागि उड्यौँ । नेपालमा काठमाडौं र पोखरा घुम्ने हाम्रो योजना थियो । यसका लागि हामीले सात दिनको छुट्टी लिएका थियौँ ।
अहिले म अस्पतालको बेडमा छु । मेरा श्रीमान् र बच्चा हराइरहेका छन् । मैले सबैलाई सोधेँ । तर, कसैले पनि उत्तर दिएका छैनन् । सबैले ‘मिसिङ’ मात्रै भनिरहेका छन् । उनीहरू कहाँ छन् ? मलाई केही थाहा छैन । मसँगै आएका अन्य दुई साथी भने सकुशल भएको खबर पाएकी छु ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राशिफल / वि.सं. २०७४ चैत्र ११ गते आइतबार
उदयपुरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीद्वारा सरकारी गाडीको दुरुपयोग
चौँथो कटारी गोल्डकपमा सहाराको विजय यात्र शुरुवात
प्रमको भारत भ्रमणअगावै पार्टी एकता : मन्त्री पुन
राज्य सभाका २६ मध्ये १२ सिटमा भारतीय जनता पार्टी विजयी
अन्तर कोरिया वार्ता अर्को हप्ता गर्न उत्तर कोरिया सहमत
एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान
आठ कक्षादेखिको प्रेम, मधेसमा बिना दाइजो अन्तर-जातीय विवाह
अरुणमा ३ मा एक कर्मचारीको डुबेर मृत्यु
अब इटहरीमा पनि अनलाइनबाट खानेपानी महसुल भुक्तानी